1.MR Vortex Preworkout Powder inotengeswa chete $ 29.95
musha » A1Supplements » Preworkout Deal: 1.MR Vortex inotengeswa ne $ 29.95 chete
Kutsvaga Preworkout Itsva yeGym? Kana zvakadaro, Kubudirira Kwepfungwa Kunobatsira Kwazvo. Tinopa 1.MR Vortex Kutengwa kubva A1 Supplements
1MR Vortex iri ku Sale Now for Only $ 29.95! Chengetedza 50% Bvisa $ $ 59.99 Retail Price
Mafuta Anosanganisira Fruit Punch yeBlueberry Lemon Ice
Chii chinonzi Vortex?
1MR VORTEX ndiyo mutsva mutsva wekushanda kwe-pre-workout powders. Iyo yakawedzerwa uye inogadzirwa ne 3 yega yega yezvinhu zvinoshandiswa zvakanyatsogadzirirwa kuwedzera uye kusimbisa kunaka kwekushanda kwako. Ne vortex, unogona kuwana simba risina simba, simba rakawedzerwa, nekuvandudzwa kwekushanda!
1.MR Vortex Supplement Facts:
Kushumira Kukura: 1 Scoop (3 Grams)
Kushumira Papoti: 50
Nhamba Kubatira Kushumira
Niacin (seNicotinic acid) 20mg
FULL SPEED VORTEX MATRIX (Mhuri) 1,705mg
Glycerol (seglycerol monostearate), Indigofera pulchra (aerial), Caffeine (seyakadai se caffeine anhydrous), White leadwort (midzi), Securinega (Securinega suffruticosa) (mashizha nemidzi), Yohimbe (Pausinystalia yohimbe) (bark).
Zvimwe Zvokudya: Citric Acid, Natural And Artificial Flavors, Sucralose, Malic Acid, Acesulfame K, Silica, Maltodextrin, FD & C Red Nhamba 40
SHANDISA MAZUVA OKUDZIDZISA PANE. FUNGA UYE KUNA KUSHANDISA (1 SCOOP) KUDZIDZA KUTI TOLERANCE NIVE NGUVA YAKAPENZIRA KUPARIDZA KUZVIRI ZVOSE ZVOKUDA. Tora imwe (1) inoshumira (1 scoop) inenge 15-30 maminitsi mushure mekurovedzwa, yakabatana mu 6-8 maunce emvura inotonhorera kana kunwa, kana sezvinoratidzwa nehutano hwehutano hwakakodzera. Nyaya Inokosha (s): Usapfuure maviri (2) servings (2 scoops) munguva ye24. Dzivisa kudya kana kunwa puroteni inogunha mukati meawa imwe mushure mekudya 1MR VORTEX. Kuti urege kurara, usatora maawa mana (4) maawa ekurara. Kutora 1MR VORTEX nechingwa, kana pazara mudumbu, inogona kuderedza migumisiro yayo.
Kwete kutarisirwa kushandiswa nevanhu vari pasi pezera 18. Usapfuudza kukurudzirwa kweroti. Usatora zvinopfuura masere (8) masvondo anotevera. Ichi chigadzirwa hachifaniri kutorwa nevadzimai vane pamuviri kana kuti vanokanganisa. Gamuchira kubvumirwa kwachiremba ane chiremba usati washandisa chigadzirwa ichi, kunyanya kana uri kutora mishonga, uine chiremba, kana kufunga nezvekuita pamuviri. RAMBA IYE ZVINHU ZVOSE NEZVO ZVOSE ZVINOKUDZIRWA KUBVA MUZVAKAVANA VANA.
Nyevero yeCaffeine: Inokurudzirwa kushanda kwechigadzirwa ichi ine mhepo yakawanda ine caffeine semakapu maviri ekofi. Usapedza caffeine, kana kusanganiswa ne synephrine, kusanganisira asi kwete kungokwana kofi, tei, soda uye zvimwe zvekudya zvinowedzera kana mishonga ine phenylephrine kana caffeine. Kaffeine yakawanda inogona kukonzera kutya, kusagadzikana, kurara, uye dzimwe nguva kushaya mwoyo nokukurumidza. Rega kushandiswa kana iwe uchinzwa ucheche, hutwa hukuru, kukurumidza kwemoyo kana kukurumidza kufema.
Chenjeri: 1MR VORTEX ine B vitamin niacin. Niacin inogona kukonzera kudengenyeka kwenguva pfupi, kusungira, kugadzirwa kweganda, uye kunzwa kwekupisa, kunyanya kana kunotorwa mudumbu risina chinhu. Izvi zvinowanzoitika.
tenga 1.MR Vortex Nhasi kubva kuA1Supplements ye $ 29.95 chete!
A1Supplements.com - Fat Loss Supplements
* Price of $ 29.95 ye1.MR Vortex inonzi yakajeka seya 5 / 2 / 14 3: 48 PM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo ruzivo rwakaratidzwa paA1Supplements.com nenguva yekutenga ichashandiswa pakutenga kwechiwedzera ichi
Dai 2, 2014 Admin A1Supplements, Pre-Workout, Supplements No Comment
Chengetedza 26% pa 4 Mabhodhoro e Hydroxocobalamin Extreme